Otu nke kasị mma na ọkaibe ngwá ọrụ na e ẹkenam site Apple Inc. na ikwu na ọrụ na-nyere bụ iMovie na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe omume na-ibudatara na internet na mkpokọta functionalities na-enwe. The software bụ n'ezie a video nchịkọta akụkọ nke na-eme n'aka na videos na-ebipụ, sonyeere, depụtaghachiri na ọbụna na-akọrọ ndị dị iche iche na saịtị na na enyi. A nkuzi bụ ihe niile banyere iMovie na nsụgharị dị iche iche na e ulo oru site na ụlọ ọrụ na nke a.
Gịnị bụ iMovie 11?
Top Nkuzi maka iMovie 11
Part1: Gịnị bụ iMovie 11?
Ka e kwuru tupu nakwa na iMovie bụ ihe kasị mma na ọkaibe video na oyiyi nchịkọta akụkọ nke e mepụtara site na Apple Inc iji jide n'aka na video editọ ịhụ ya mfe na mfe iji jide n'aka na ihe iseokwu banyere edezi na-kpebiri na zuru. Ọ na-na--ahụ kwuru na ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na iMovie ebudatara site Apple Inc ukara URL nke nke bụ dị ka ọ nwere niile nsụgharị. iMovie 11 nwere bụkwa otu ihe ahụ e ji mara na ọ na oru na October 20, 2010.
Gịnị mere anyị apụghị-ahụ na apple.com?
Isi ihe mere n'azụ onu bụ na Apple Inc chọrọ guzosie ike iMovie dị ka iche iche ika na isi website e raara nye ngwaahịa na ọrụ na-na n'ihu ụlọ ahịa nke nzukọ. E nwere ọtụtụ uru nke na-eme otú ihe atụ luring ndị ahịa n'ime azụmahịa na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na URL nke e kwuru n'elu na-eji. Chinchi na yiri mbipụta-eduga ná ndị ọrụ na-Apple nkwado otú ahụ URL na nkwado okwu na ya ka e raara kama isi website.
iMovie 11 bụ onye nke kasị mma na programmụ na ọ pụkwara na-akpọ ka ndị kasị enwekwukwa version nke mmemme na-awa site Apple na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà atụmatụ nke usoro ihe omume na-eji mgbe ọ e ebudatara. Nke a na ngalaba nke nkuzi ga-eduga onye ọrụ kwupụta dị iche iche download njikọ bụ ndị dịịrị ma ama weebụsaịtị nke ụwa a nke internet.
The nzube bụ nanị iji mee ka n'aka na ọrụ na-pacified na ọ dịghị mgbe ha ga-ahụ na a njikọ n'ebe ndị ọzọ. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi mgbe ọ na-abịa downloads. Na-esonụ bụ ụfọdụ njikọ na nke a ma ọ bụ ka e cheta na e nwere ndị ọzọ weebụsaịtị nakwa na nwere iMovie enịm ke ha na sava na mkpa nke hour bụ nanị chọọ na internet ime needful:
Part3: top Nkuzi maka iMovie 11
E nwere ọtụtụ Nkuzi metụtara isiokwu na dị online iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma ma ebe a na nkebi nke a n'elu 5 Nkuzi ga-ẹkenam ka na-agụ:
1. Mee a video iji iMovie
WikiHow bụ ịrụ ụka adịghị otu nke kasị mma weebụsaịtị maka online Nkuzi na maka otu ihe ọ ga-eme n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ihe ọmụma na-enyoba na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke si òkè. The nkuzi na URL n'elu ga-eme ka n'aka na 11 nzọụkwụ akụziri onye ọrụ na-eme ka a video iji iMovie.
The nkuzi bụ otu n'ime ndị kasị mma na ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi ka isi nke isiokwu enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The mfe na onwe nkọwa nzọụkwụ ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. The screenshots agbakwunyere ga-ekwe ka onye ọrụ na-esi na isiokwu a na-kpọmkwem n'ụzọ.
2. Mmalite malitere na iMovie
The isi nke iMovie na-kọwara na nke kacha mma n'ụzọ mgbe ọ na-abịa a nkuzi. Mac World bụ a website ọzọ ahụ bụ ma ama maka niile atụmatụ na mkpokọta ngosi nke ihe ọmụma na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na ndị nkuzi na-ịchọgharịrị na-arụpụta ihe kasị mma.
A nkuzi mere ka n'aka na ihe na-kọwara na mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ n'ụzọ nke mere na ndị ọrụ na-ọhụrụ isiokwu na-na-a jide ma nwere ike itinye usoro n'ụzọ na-na-ahuta-kasị mma niile ugboro.
3. iMovie Nkuzi si Lynda.com
Site video trimming ka ịcha na site n'isonyere ka kewara ọ bụ usoro nke Nkuzi nke ga-ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta kasị mma na ndị ọkaibe pụta na ikwu na iMovie 11. The mfe Ọdịdị na ọma jisiri ọmụma ga-ọlị ime ka a onye ọrụ na-eche na otu isiokwu bụ ihe ọhụrụ.
N'ihi na ihe niile ndị ọrụ ndị chọrọ ịmụta iji iMovie 11 na-enweghị na-eme nchọgharị maka Nkuzi n'ihu na-gwara iji jide n'aka na a na website a ịchọgharịrị iji nweta ihe ọmụma nile na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ. Ọ ga na-edu ha ka ha na ebube zoro n'ime usoro ihe omume.
4. Video edezi na iMovie
A nkuzi na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ihe ọmụma. Ọ bụ ezie na ijeụkwụ bụ a bit ngwa ngwa ma onye ọrụ ka ga-enwe ike ime n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ihe ọmụma bụ n'ebe aka site na isiokwu. Na-na na nke a website ga-ahụ na onye ọrụ mgbe dara azụ.
Ijeụkwụ bụ ezie na ngwa ngwa ma ọ bụ ihe kasị mma banyere nkuzi dị ka ọ na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe mmemme ndụmọdụ. Ihe ọmụma na obere oge bụ ihe na kemgbe n'ozuzu ike nke a website mgbe ọ na-abịa rivals.
5. Mụta otú dezie vidiyo na Apple iMovie
Nke a nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu ga hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe omume ọmụma n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ihe ngwọta na ụzọ outs na e kọwara na iji nke a nkuzi bụ egwu na ọ bụ ukwuu-atụ aro ka novice ọrụ. Ọ ga-bụghị naanị jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma ma ga-ekwe ka ha nweta ihe kasị mma pụta resultantly.
Asụsụ nakwa dị ka n'ozuzu teminoloji nke e ji mee iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ihe ọmụma bụ egwu na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na video agbakwunyere n'ime ndị nkuzi na-eji dị ka a akwụkwọ na-esi na-ekwu.
> Resource> iMovie> 5 Atụmatụ maka iMovie 11 mkpa ka ị mara